Victoria Kyaw on Flipboard
45 Flips |3Magazines |5Likes |3Following | 1 Follower | @VictoriaKyaw | Keep up with Victoria Kyaw on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Victoria Kyaw”
Myanmar enteredanew era on Wednesday as Aung San Suu Kyi'sdemocracy movement took power after 50 years of military domination, withaclose aid of the Nobel Laureate sworn in as president.<p>Htin Kyaw,aschool friend and confidante of the democracy champion, succeeds former general Thein Sein who …
သိမ်းဆည်းမြေ ဧက ၃ သိန်းကျော် စွန့်လွှတ်ပြီးကြောင်း ကြေညာ ၁၉.၁၂.၂၀၁၄ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အများဆုံး ပါဝင်သိမ်းယူထားတဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုတွေထဲက မြေဧက ၃ သိန်းကျော်ကို ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ မြေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီက ဒီနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ မြေသိမ်းတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ရဲ့ လယ်မြေနဲ့ အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခံရမှုကြောင့် ပြာည်သူများ နစ်နာမှုမရှိစေရေးအတွက် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာ ၇ ခု တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစီရင်ခံစာတွေအရ ဧက ၁ သိန်းနီးပါး စွန့်လွှတ်ပြီး ကျန်ဧကတွေကတော့ စီမံကိန်းရည်မှန်းချက်အတိုင်း မသုံးလို့ သီးခြားစွန့်လွှတ် တာဖြစ်တယ်လို့ မြေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာ ၇ ခုမှာ အမှုတွဲ ၇၅၀၀ ကျော်ပါဝင်ပြီး အပိုင် ၆ နဲ့ ၇ အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ ဒီနေ့ ထုတ်ပြန်တာမှာ မပါသေးပါဘူး။ အစီရင်ခံစာ အပိုင်း ၅ အထိ စွန့်လွှတ်မြေ အမှုပေါင်း ၁၁၆၅ ခုမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အမှုပေါင်း ၈၀၀၊ မြေဧက ၁ သိန်း ၅ သောင်းကျော်နဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စွန့်လွှတ်မြေဧက ၃ သိန်းကျော်မှာ ဧက ၁ သိန်း ၆ သောင်းကျော် လွှဲအပ်ဖို့ ကျန်နေသေးပြီး အဲဒီထဲမှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဧက ၁ သိန်းကျော် ပါဝင်ပါတယ်။ DVB
Kidney Stone Juice and Juices You Can Prepare to Naturally Remove Gallstones — Wellnessbin
Studies show that one in ten people will have kidney stone at some time in their lives. To prevent kidney stone formation, drink lots of fluids such …
B4 ရဟတ်ယာဉ် မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးနောက် ထိုင်းရဟတ်ယာဉ်မှူး ၊ မြန်မာရဟတ်ယာဉ်မှူးနှင့် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနာယက ဦးတေဇ၏ ကိုယ်ရေးလက်ထောက် ဦးရွှေရင်တော်ကြီးတို့ …
ကမ္ဘာတွင် သစ္စာအရှိဆုံး သတ္တဝါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သစ္စာ အရှိဆုံး သတ္တဝါ ဆိုတာ အိမ်မွေးခွေး တိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်မယ် ဆိုတာ သိကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သခင် အဖြစ် သတ်မှတ် ပြီးရင် သူတို့ရဲ့ တစ်သက်စာလုံး ဘယ်လို အခြေအနေ ရောက်ရောက် မခွဲပဲ အတူနေထိုင် တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မိသားစု တစ်ခုက မွေးထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အရွယ်ရောက် ခွေးတစ်ကောင် ကို နောက်ထပ် မိသားစု တစ်ခုထံ သို့ လွဲပြောင်းရန် ခက်ခဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သခင်က ဆင်းရဲပြီး စားစရာ မပေးနိုင်တော့ရင် သူ့ဘာသူ .............. သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.phothutaw.com/2014/10/blog-post_816.html
Who could use this right now? Thank you Lessons Learned In Life
Alcohol and Coffee အရက်မူးတာကို ကော်ဖီကထူးစေသလား ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် သောက်ထားတဲ့အရက်ရှိန် (မူးနေတာ) ပြေသွားမယ်လို့ယူဆချက်ဟာ နားထောင်ရင် အဟုတ်လို့ ထင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာမှုတွေလုပ်ကြည့်တော့ အဲလိုမဟုတ်ပါ။ နှစ်အနည်းငယ်တုံးက မိတ်ဆွေတချို့နဲ့အတူ ကျမ ဇာတ်ရုံတခုကကပွဲမှာ အသုံးတော်ခံခဲ့ပါတယ်။ ကျမခင်ပွန်းက အရောက်နောက်ကျပါတယ်။ သူက ခရစ်မတ်နေ့လည်စာနဲ့ ကော်ဖီသောက်ပြီး မွန်းလဲနောက်ပိုင်းတခုလုံးမှာ ဝိုင်တွေ သောက်နေခဲ့တာပါ။ ကံကောင်းတာက ပြဇာတ်က ဟာသဖြစ်ပါတယ်။ ကျမယောက်ျားဟာ လိုတာထက်ပိုပြီး ရယ်မောနေလို့ သူနဲ့တွဲသရုပ်ဆောင်ရသူကတောင် အံ့သြနေကြရပါတယ်။ အားလပ်ချိန်မှာတော့ နောက်ကျိနေတာ သက်သာသွားအောင်ဆိုပြီး ကျမသူ့အတွက် ကော်ဖီ ဝယ်တိုက်ပါတယ်။ ပြဇာတ် ဒုတိယပိုင်းမှာ သူ အတော်ငြိမ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဖြစ်ရင် ကျမတွက်ထားသလို ကော်ဖီကနေ မျက်လှည့်ပြသလိုသတ္တိ တကယ်ရှိသတဲ့လား။ Sedative effects အရက်ဆိုတာ များလေလေ အိပ်ချင်စိတ်များလေလေဆိုတာ လူတိုင်း .... သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.phothutaw.com/2014/09/alcohol-and-coffee.html
ယနေ့ထုတ် #7DayNews ဂျာနယ်အတွက် အထူးအချပ်ပို #7DayDaily သတင်းစာ
ဘာသာ၊ သာသနာကို ညှိနွမ်းစေမှုပုဒ်မ ၂၉၅၊ ၂၉၅(က) ဖြင့် အရေးယူခံထားရသော သရုပ်ဆောင်ရဲတိုက်ကို ဗိုလ်တ ထောင်မြို့နယ် တရားရုံးက စက် တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အပြီးသတ် …
အိပ်ပျော်နေစဉ်လမ်းထလျှောက်တတ်လျင် ဂရုပြုရန်လို အိပ်ပျော်နေစဉ် လမ်းထလျှောက် တတ်သူများသည် မိမိတွင် ယင်းအကျင့်ရှိကြောင်း သိရှိရန်လိုအပ်ပြီး ညစဉ် အိပ် စက်သော အချိန်များတွင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံခြုံစိတ်ချ ရအောင် စီမံပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပြီး အခန့် မသင့်ပါက အန္တရယ် သက်ရောက်ခြင်းမှ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း အထိဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ အိပ်ပျော်နေစဉ်လမ်းထလျှောက်ခြင်းကို ကလေးငယ်များတွင်ပိုတွေ့ ရပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘ၀တွင် အိပ်ပျော် နေလျက်လမ်းလျှောက်သည့်အကျင့်ရှိသူစုစုပေါင်း၏ ၄ ရာခိုင်နှူန်းခန့် သည် အရွယ်ရောက်သည့်အထိလည်း ယင်း အကျင့်ပါသွားလေ့ရှိကြောင်း ..... သတင်းအပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ ===> http://www.phothutaw.com/2014/09/blog-post_889.html
မေမြတ်နိုး Miss Asia Pacific World သရဖူပြန်သိမ်းခံရ
သရဖူဆုရှင်အဖြစ် ထိုက်တန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် အလှမယ် မေမြတ်နိုးကို Miss Asia Pacific World 2014 ဆုရှင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲကာ သရဖူသိမ်းလိုက်ကြောင်း …
A new feature Facebook introduced Monday might be great for procrastinators.<p>Called Save, the feature is basicallyaweb browser bookmark that lets you put off reading or viewing those important content — like that quirky top 10 list or must-see cat video — your Facebook friends have shared.<p>“Every …
Consumer Protection Association of Myanmar
ကျောင်းမုန့်ဈေးတန်းမှာ.......................... သင့်ကလေး... ဘာမုန့်တွေဝယ်စားနေကြလဲ??<br>အခုတလောမှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူ တချို့နဲ့ …
ပျဉ်းမနားပေါင်းလောင်းကွင်း ပြည်သူ့ကွင်းအဖြစ် ပြန်ဖွင့်
နေပြည်တော် ဘောလုံးအသင်းက အိမ်ကွင်းအ ဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသော ပျဉ်းမ နားမြို့ရှိ ပေါင်းလောင်းအားက စားကွင်းကို ပြည်သူ့ပေါင်း လောင်းအားကစားပြိုင်ပွဲကွင်းအ …
ပြန်ပေးဆွဲထားသော အမေရိကန်အမျိုးသမီးအတွက် IS အစ္စလာမစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့က ပြန်ပေးရွေးငွေ ဒေါ်လာ ၆ သန်းတောင်း =============================================== လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်က ဆီးရီးယားတွင် လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသော အမေရိကန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မွတ်စလင် အစွန်းရောက်များက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ရာ ယင်းအမျိုးသမီးလွှတ်ပေးရန်အတွက် IS စစ်သွေးကြွက ဒေါ်လာ၆သန်း ကျော်လိုသည်ဟု သူမ၏ မိသားစု၊ အမေရိကန်အရာရှိများနှင့် သတင်းများက အစီရင်ခံခဲ့သည်။ Ref : USA TODAY
• <b>Breakfast:</b><p>Oatmeal with flaxseed oil, raisins are optional<br>Itsafact that the best things to eat forahealthy love life are also the best things for …
ပညာရေး ယန္တရားကြီး မည်သို့ ခရီးဆက်မည်နည်း Monday, August 25, 2014 အဆင့်မြင့်ပညာရေးကဏ္ဍ အရာရှိပညာရှင်တချို့နဲ့ ၀န်ထမ်းမိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ ပြောကြားချက်၊ သုံးသပ်ချက်၊ အကြံ ပြုချက်များကို အခြေခံပြီး ဒီစာကို ရေးလိုက်ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ပညာရေးဝန်ကြီးရုံးမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပွဲနဲ့ ဆက်စပ်ဥပဒေများ၊ နည်း ဥပဒေများ၊ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ် စာတမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျင်းပခြင်းဖြစ်တယ်လို့ သြဂုတ် လ ၁၇ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသ တင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။ ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးအပါအ၀င် ဒုတိယ၀န်ကြီး တစ်ဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် ၄၇ ခုမှ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများ တက် ရောက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပဒေရေးဆွဲရေးကိစ္စများ၊ တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်တွင် ပညာ ရပ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု၊ ဘဏ္ဍာ ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု၊ အုပ်ချုပ် ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှု၊ သင် ကြားရေးဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုတို့ကို ထည့် သွင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုံးလုပ်ငန်းများ မြန်ဆန်သွက်လက်ရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး၊ တာဝန်သိမှု တာဝန် ယူမှု အလေ့အကျင့်ကောင်းများ မြှင့်တင်ရေး၊ ICT ကို သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုရေး၊ စာသင်ဆောင်များ၊ ဆရာ၊ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူအဆောင်များတွင် ရေ၊ မီးပြည့်စုံရေးနဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေး၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှု အကောင်အ ထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးကိစ္စများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ‘‘ကျောင်းက ပါချုပ်ကတော့ သောကြာနေ့ည နေပြည်တော်ကို ဆင်းသွားပြီး စနေနေ့ညတွင်းချင်း ပြန်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ မနက်မှာ ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးတွေနဲ့ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး ၀န်ကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ပြန်လည် ပြောပြခဲ့တယ်။ ဌာနမှူးတွေက တစ်ဆင့် ဌာနမှာရှိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို ထပ်ဆင့်ပြောပြ ကြပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်လိုက်နား ထောင်၊ ရေးမှတ်၊ ပြန်ပြောကြ တာဆိုတော့ ၀န်ကြီးရဲ့ မှာကြား လမ်းညွှန်မှု အတိမ်အနက်၊ ဆိုလို ရင်းနဲ့ ကွဲလွဲမှုအနည်းနဲ့ အများရှိ နိုင်ပါတယ်’’လို့ တက္ကသိုလ်ဆရာ တစ်ဦးက သုံးသပ်ပြပါတယ်။ ‘‘ဌာနမှူးက ဌာနတွင်း အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ ပြန် ပြောတဲ့အထဲမှာ ပညာရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးအကျယ်တ၀င့်ပြောသွားတာ မရှိဘူး။ ပညာရေးဥပဒေတွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့ဆိုလား တစ်ခွန်းပဲကြားလိုက်ရတယ်။ သဲသဲကွဲကွဲတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိကထားပြောမသွားဘူး။ ‘‘တက္ကသိုလ်တွေ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်တော့မယ်။ တာ ၀န်ကျနေရာ အပြောင်းအရွှေ့ တွေ မရှိတော့ဘူး။ ကိုယ့်တက္က သိုလ်မှာ ၀င်ငွေရဖို့အတွက် သင် တန်းတွေ ဖွင့်ရမယ်။ အလှူရှင်ရှာ ရမယ်။ ဘတ်ဂျက်ကို ငါးနှစ်စာ ဆွဲမယ်လို့လည်း ဆိုတယ်။ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူကနေ ဆရာ၊ ဆရာမကို ပြန်လည်အမှတ်ပေး အကဲဖြတ်မယ့် QA (Quality Assurance) စနစ်ကျင့်သုံးမယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူကိုယ်တိုင် ကျောင်းအပ်ရမယ်လို့ ဆိုတယ်။ One Stop Service နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ကိစ္စတွေမှာ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ မပတ်သက်ကြဖို့ သတိပေးပါ တယ်။ နောက်လုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်တက္ကသိုလ်၊ ကိုယ့်ကျောင်း လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ့်အိမ်လုံခြုံရေး ကိုယ်တာဝန် ယူရသလို သဘောထားရမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်’’လို့ ထပ်ပြီး ပြောပြပါတယ်။ ဆိုတော့ နေပြည်တော်မှာ ၀န်ကြီး အဓိကထားဆွေးနွေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာနဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမတွေဆီ ရောက်လာတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များက တစ်ထပ်တည်းကျပါ့မလား တွေးမိပါ တယ်။ ဆိုလိုတာက ပညာရေးအ တွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးတဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ ဆက်စပ်ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမအများစု ဘာမှ မသိကြရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အချိန်ယူ လေ့လာဖတ်ရှု အကြံပြုနိုင်အောင် ဝေငှပေးတာ မျိုးလည်း တက္ကသိုလ်အများစုမှာ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အမျိုး သားပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းတို့၊ အဆင့်မြင့်ပညာရေး ဥပဒေ ဒုတိယမူကြမ်းတို့ကို ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရှာဖွေလက်ဆင့်ကမ်းရယူထားကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြဆွေးနွေးခွင့်၊ အကြံပြုမေးမြန်းခွင့်များကိုလည်း ဖန်တီးမပေးဘူးလို့ ပြောပြပါတယ်။ ဇူလိုင်လထဲတုန်းက ပညာ ရေး ၀န်ကြီးရုံးက စာအမှတ် ၁၂၀ ခွဲ ၁ (စ) ၂၀၁၄ (၄၁၅) နဲ့ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် အလိုက် ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စကို အကြောင်းကြားထားကြောင်း မိတ်ဆွေဆရာ တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ ကျောင်းတိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်မိတ်ဆက်ပွဲများ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ဖို့၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ အားကစားဆိုင်ရာ၊ အနုပညာ ဆိုင်ရာ ရက်သတ္တပတ် သတ်မှတ် ၍ လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ဖို့၊ လာမည့် ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်တိုင်း စာသင်နှစ်ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ဖို့၊ အထက်ပါလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကို ရုပ်မြင် သံကြား၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ စာ စောင်၊ မီဒီယာများမှာ ပါဝင် ရေးသားကြဖို့၊ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်များကိုဦးစီးဌာန၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်အလိုက် ယခုပညာသင်နှစ်ဝက် ကာလအတွက် ပြက္ခဒိန်များ ရေးဆွဲတင်ပြဖို့များဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ၀န်ကြီးနဲ့တစ်ကွ အထက်လူ ကြီး တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ မြန် မာ့ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ၊ တက္ကသိုလ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ကိစ္စများကို အားစိုက်ကြိုးပမ်း လျက်ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော် လှုပ်ရှားကြရမယ့် အောက် ခြေအဆင့်မှာ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ပေါ်လစီဆိုင်ရာ အခမ်းအနားများ ကို ဦးစားပေးနေကြပါသေးတယ်။ ဥပမာ အခုဖွင့်လှစ်နေတဲ့ ပညာသင်ကာလအတွက်ဆိုရင် ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်အထိ စာသင်ရက်စုစု ပေါင်း ၆၄ ရက်ပဲရှိပါတယ်။ ဇွန်လဆန်းမှာ တက္ကသိုလ်တွေစပြီးဖွင့်ပေမယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ မစုံလင်တာရယ်၊ ပုံနှိပ်စာအုပ်ရောင်းပေးဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်ကြတာကြောင့် တက္ကသိုလ် အများစုမှာ ဇွန်လလယ်ခန့်ရောက်မှစပြီး စာသင်ကြရတာပါ။ စက်တင်ဘာလလယ်မှာ စာမေးပွဲတွေ စတင်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ၊ အသင်း အဖွဲ့ဆိုင်ရာ၊ စီမံချက်ဆိုင်ရာပွဲ လမ်းသဘင်တွေကြောင့် စာသင်ပျက်ကြတဲ့ ရက်တွေလည်းရှိတယ်လို့ တတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။ ဒီစာရေးရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကို ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ၀န်ကြီးအနေနဲ့နယ်က တက္ကသိုလ်တွေအထိ ကိုယ်တိုင်ဆင်း ပကတိအခြေအနေကို လေ့လာပြီး မှာကြားလမ်းညွှန်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ၀န်ကြီးရဲ့ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေအထိ ဂဃနဏနားလည်သဘောပေါက်သိရှိအောင် စာနဲ့ဖြစ်စေ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှ ဖြစ်စေ အချိန်နဲ့အမျှ အသိပေးနိုင်ရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလားလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ပိုပြီး ထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ခုတော့ ၀န်ကြီးက တခြား၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက သတ်သတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ တချို့က သုံးသပ်ပြပါတယ်။ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် လည်း ပညာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ တွေ၊ ၀န်ကြီးနဲ့ ပါချုပ်တွေရဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ လုပ်ငန်းအစီအ စဉ်ဆိုတာတွေကို လောလော ဆယ်အခြေအနေနဲ့ ပြောရရင် အူရီးဒူးတို့၊ တယ်လီနောတို့ လောက် စိတ်မ၀င်စားကြဘူး။ သူတို့ တက္ကသိုလ်တွေမှာရှိတဲ့ Lab ခန်း၊ e-library ခန်း၊ ကွန်ပျူတာ ခန်းတွေက ပိတ်ထားတတ်တော့ အပြင်မှာ Wi-Fi Free အပြိုင်အ ဆိုင်ပေးနေတဲ့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ပိုပြီး အချိန်ကုန်ခံနေတတ်ကြ တယ်။ ကျုပ်လည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀က်ဘ်ဆိုက်ကတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ထားတဲ့ ပညာရေးဝန် ကြီးဌာနရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀င် ကြည့်မိပါတယ်။ သတင်းတွေ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေ၊ သုတေ သနစာတမ်းတွေ၊ မှာကြားချက် တွေ ဘာမှ Up to Date မဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ ပတ် သက်လို့လည်း အစိုးရရဲ့ တရားဝင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ရှာကြည့်မိပါတယ်။ တွေ့ရတာက မပြည့်စုံတဲ့ မူကြမ်းတစ်မျက်နှာနဲ့ လွဲမှားဖော်ပြထားတဲ့ ငွေကြေးခ၀ါချမှုဥပဒေတစ်မျက်နှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက် ပညာ ရေးကဏ္ဍ အသက်တမျှ အရေး ကြီးနေချိန်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ လျှို့ဝှက်ကိစ္စများမှအပ ကျန်သော သတင်းများ၊ ဆောင် ရွက်ချက်များကို ပြည်သူတွေသိ အောင် ချပြစေလိုပါတယ်။ ခု တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေး ယန္တရားမှာ ပါဝင်ခုတ်မောင်းခရီး နှင်နေကြတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ဆရာ၊ဆရာမတွေကိုယ်တိုင် သတင်း အချက်အလက်များကို အတိအကျမရဘဲ ဖြစ်နေသေးတာမဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။ 7daydaily.com
အမေရိကန် ဂျာနယ်လစ်ကို အီရတ်စစ်သွေးကြွတွေ ခေါင်းဖြတ်သတ် ………. အီရတ်မှာ အမေရိကန်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာကို လက်တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ် ဂျိမ်းစ်ဖိုးလေး ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်ပြီလို့ ဂျီဟတ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Islamic State က အင်္ဂါနေ့က ကြေညာပါတယ်။ အဆိုပါအလွတ်သတင်းထောက်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်စစ်သွေးကြွတစ်ဦးက ခေါင်းဖြတ်သတ်နေပုံ ပါရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ယင်းအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဖိုးလေး ဟာ ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလကတည်းက ဆီးရီးယားမှာ လက်နက်ကိုင်တစ်စု ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၄၀ အရွယ် ဖိုးလေး ဟာ အတွေ့အကြုံရင်သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြိး လစ်ဗျားစစ်ပွဲသတင်းကို သွားရောက်သတင်းရယူခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ အာဆတ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု သတင်းတွေကို ဂလိုဘယ်ပို့စ်၊ အေအက်ဖ်ပီ နဲ့ တခြားသတင်းဌာနတွေ အတွက် ရေးသားပေးပို့ဖို့ ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆီ သွား ရောက်စဉ် အခုလိုအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားက အီရတ်မြောက်ပိုင်းက အဆိုပါစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ရဲ့ စခန်းတွေကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အခုထိ ပစ်မှတ် ၉၀ ကျော်ကို တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပြီ လို့သိရပါတယ်။ ဘာသာပြန်သူ.. ကိုမိုးထက် Ref: AFP
ပျောက်ဆုံးနေသည့် အီဘိုလာ ရောဂါသည်များ ပြန်လည်ရှာတွေ့ကြောင်း လိုက်ဘေးရီးယား ကြေညာ
လိုက်ဘေးရီးယား နိုင်ငံတွင် ကုသရေးစင်တာတစ်ခု တိုက်ခိုက်ခံရချိန်၌ ပျောက်ဆုံးသွားသည့် အီဘိုလာ ရောဂါသည်များကို ပြန်လည် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း …
သတင်း မြန်မာ-အမေရိကန် စစ်ဘက် ဆက်ဆံရေးအပေါ် အမြင်များ ကွဲပြား ထက်နိုင်ဇော် ၂၀၁၅ တောင်မှ ဘာဖြစ်မယ်မှန်း မသိသေးတာ။ ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဖြစ်မလား၊ မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့ မသိဘူး။ အခု PR (အချို့ကျ ကိုယ်စားပြု) စနစ် ဆိုပြီးလည်း လုပ်လာတော့ အခြေအနေတွေက ဘယ်လို ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ပြောမရဘူး http://burma.irrawaddy.org/news/2014/08/20/63418.html